Adaktusson: Uma carbiyeeysni inaan hoggaanka KD qabto - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Adaktusson: Uma carbiyeeysni inaan hoggaanka KD qabto
La daabacay måndag 9 februari 2015 kl 10.58
Göran Hägglund, Alf Svensson iyo Lars Adaktusson. Sawirle: Claudio Bresciani/TT
Lars Adaktusson oo ka mid ah xil-dhibaannada baarlamanka EU u matala xisbiga Kristendemokaratera, ayaa sheegay in aannu diyaar u ahayn inuu isu taago tartanka hoggaanka xisbiga, dabadeed kolkii uu hoggaamiyihii xisbigaasi Göran Hägglund uu ku dhawaaqay inuu jagada ka degi doono.
Adaktusson ayaa go'aankiisaa ku saleeyay in aanay waayo-arag-nimada uu xisbga u leeyahay aanay ku fillayn. Laba sannadood ayaa laga joogaa kolkii uu Adaktusson oo hray ugu howl-geli jiray suxufi-nimo uu siyaasadda ku biiray.
- Wayo-arag-nimo igu filan ee dhanka siyaasadda ma aan lihi. Sidoo kale uma lihi waayo-arag-nimo dhanka su'aalaha siyaasaddaha kala duwan, sida uu shegay Lars Adaktusson oo wareeysi siiyaya war-geeyska maalinlaha ee Dagens Nyheter.
Kulan aan caadi ahayn oo xisbiga KD yeelan doona 25-ka bisha abriil ee sannadkan ayaa lagu talo jiraa in lagu doorto hoggaamiyihii bedeli lahaa Göran Hägglund.